Ọrụ | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
TCDD ekwuputala nsonaazụ nyocha nke ọnụ ya maka iweghachite ndị ọrụ ruo ọnwa atọ. N’ozi ọma banyere emezighi ekwuputa nsonaazụ nke nyocha TCDD mbanye; Banyere na-abụghị ngosipụta nke udomo oro nsonaazụ banyere usoro mbanye site TCDD, TC Transportation [More ...]
TCDD YHT ga-arụ ọrụ Machinist - TCDD ga-eme ọrụ Ntinye aka nke 262: E meghewo ndị ọrụ TCDD ma kesaa nkesa ndị ọrụ na 5.Nov.2019. Na mkpebi bipụtara na Official Gazette, 262, nke bụ nke tọgbọ n’etiti thezọ ilgbọ njem Steeti, [More ...]
TÜVASAŞ mara ọkwa na ọ ga-ewekọta ndị ọrụ 12 injinia maka ọrụ ụgbọ ala obodo ahụ. A ga-enyocha oru ngo ụgbọ oloko, Mechanical, Electric, Industrial, Metallurgical, Software na ndị gụsịrị akwụkwọ na injinia, ndị na-eme KPSS na YDS'den ọ dịkarịa ala 70. [More ...]
BURULAŞ, ụlọ ọrụ nke Bursa Metropolitan Municipality kwuputara na ọ ga - eme mkpesa na - adịgide adịgide nke 5 iji kenye mpaghara ndị na - adọba ụgbọala n'akụkụ ebe ọrụ dị iche iche na mpaghara Bursa. Dị ka ọkwa ahụ si kwuo, ndị ọrụ a ga-arụ ọrụ dịka ndị ọrụ nchekwa n'ebe ndị a na-adọba ụgbọala ga-aga BURULAŞ. [More ...]
A ga-ekenye ndị ọrụ ụgbọ ala nwanyị 10 ka ọ bụrụ ndị ọrụ na EGO General Directorate nke Ankara Obodo ukwu. • Obere onye ọkwọ ụgbọ ala maka ndị gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị na afọ 3 nke ahụmahụ ịkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ [More ...]
Akpa ke Akụkọ Ochie nke IETT: 'A Ga-Edinara Nwanyị Ọkwọ ụgbọala'
Onye isi obodo Ekrem İmamoğlu, onye kwere nkwa “Womenmụ nwanyị ga-ekwu n'okwu obodo, na ndị isi obodo” kwere nkwa ịhọrọ ndị ọkwọ ụgbọala nke IETT chọrọ n'aka ụmụ nwanyị. Directorate IETT, otu n'ime ndị mmekọ nke Istanbul Metropolitan Municipal, Onye isi ala nke IMM [More ...]
Dabere na nkwupụta bipụtara site na İŞKUR, TÜLOMSAŞ ga-eme ịzụta ihe n'akụkụ dị iche iche maka enweghị ndị ọrụ. Ndị a bụ usoro na nkọwa. Ntinye akwụkwọ 30 September site n'aka ndị ọrụ ọha dịka mgbasa ozi bipụtara dịka nke 2019 [More ...]
Eskişehir Obodo ukwu ESTRAM 5 ekwupụtala ọkwa ịnabata ọrụ na-adịgide adịgide. Dabere na ọkwa ọkwa sistemụ ọka ọka 1 nke na-egosi nrụzi na ndozi, a ga-arụ ọrụ ndozi ọka nke 4. Ọnọdụ nke ndị ọrụ ga-ewe n'ọrụ [More ...]
Obodo Mersin Metropolitan kwuputara mkpokọta ndị ọrụ ụmụ nwanyị 100 maka ije ozi n'ubi. Onye isi obodo Mersin nke Obodo Mịnịsta bụ Vahap Seçer, ebidola ọrụ na mbanye ndị ọrụ ụmụ nwanyị. Mayor Seçer kwuru, a chọrọ m Mersin mara mma karịa. [More ...]
Obodo Eskişehir Metropolitan kwupụtara ịzụta nke ndị ọkwọ ụgbọala 65 You nwere ike ịmụta site na akụkọ anyị banyere ọnọdụ ịzụta na ọnọdụ ngwa. N'ime ọkwa ọhụrụ ahụ e bipụtara na İŞKUR, Estram Light Rail Systems Systems Transportation Co. na esonyere na Eskişehir Municipality. site na onye ọkwọ ụgbọ ala 65 [More ...]
TCDD Transportation Inc. General Directorate nke ndị bụbu ndị ikpe, ndị nwere nkwarụ na ndị ọrụ egwuregwu ga-akpọga na nsonaazụ ngwa ọrụ ọkwa ekwuputara. Pịa maka nsonaazụ nke Ndị Nchịkwa Ndị Ọrụ Ọrụ Nwere Nnyocha Pịa maka Nsonaazụ Ngwa nke Ndị nkuzi Ndị Ọrụ Ndị Nwere Ọrịa [More ...]
Turkey Locomotive na Engine Industry Corporation si General Directorate: The ngo ga-ex-mara ikpe dị ka 2 ndị Directorate General nke Posts ew na-adịgide adịgide ọrụ. Mbanye mgbasa ozi na usoro na ọnọdụ na website nke Turkey Business Council 26.08.2019 - 30.08.2019 ụbọchị [More ...]
Turkey n'ụgbọala Industries Inc. 16 site na General Directorate na July 2019'da 26 mgbe ekwusara ọkwa nke onye ọrụ na-adịgide adịgide. TÜVASAŞ mbanye nke nza ka emechara n'ihu ndị ọhaneze. Results nke lọtrị e Turkey n'ụgbọala Industry (TÜVASAŞ) site ọtụtụ [More ...]
Turkey Business Association (TEO) ga-eme ka ọha na eze ọrụ ọrụ n'elu ihuenyo bipụtara TCDD General Directorate nke dịkarịa ala akwụkwọ praịmarị na-agụsị akwụkwọ n'etiti aga ime ụgbọ okporo ígwè akara mmezi na mmezi ọrụ n'ikuku. A ga-enweta akwụkwọ anamachọihe maka ọkwa ọrụ site na İŞKUR [More ...]
TULOMSAS KPSS 2019 / 1 Central Inyeaka N'ime Oke Akwụkwọ Ndi achọrọ ekwuputara!
Turkey Locomotive na Engine Industry Inc. Weebụsaịtị gọọmentị (T websiteLOMSA “)“ https://www.tulomsas.com.tr duyuru kwupụtara na nkwupụta nke Nlele Ihe Nhọrọ Ọha (KPSS) 2019 / 1 nke etiti nke akwụkwọ achọrọ n'aka ndị chọrọ ime ọkwa. Akwụkwọ ntinye akwụkwọ chọrọ site n'aka 7 August 2019 [More ...]
Bursa BURULAŞ na-enweta 55 Onye ọrụ, ndị ọkwọ ụgbọ ala na ndị isi ọrụ Box
Dabere na nkwupụta bipụtara site na İŞKUR, BURULAŞ kwuru na ọ ga-eweghachi ndị ọrụ 55 n'ọkwá dị iche iche. Nke a bụ nkesa ndị ọrụ na ọnọdụ. July 25 2019 Turkey Business Association ka a tọhapụrụ maka ire zuo nke ọha ọrụ na-arụ ọrụ. a na [More ...]
Ndị ọrụ gụsịrị akwụkwọ na TÜVASAŞ bụ ndị gụsịrị akwụkwọ na-arụ ọrụ nke 26 na-amalite!
TÜVASAŞ bipụtara ọkwa ọkwa. Turkey dị iche iche pozison izute mkpara ụkọ n'ime TÜVASAŞ Dị ka mara ọkwa, nke e bipụtara na Employment Agency ga-eme ka 26 mkpara na n'ikuku. Ịzụta dịka ọkwa mara ọkwa dị irè maka ndị na-eme ihe na Normal Status [More ...]
Turkey n'ụgbọala Factory ka a tọhapụrụ a ọhụrụ ad ịzụrụ site General Directorate of TEO. Dịka ọkwa ahụ site na İŞKUR Wagon Factory 26 na-adịgide adịgide ga-anakọta. Ọ dịkarịa ala ndị gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na-achọ ka ha tinye akwụkwọ maka ndị ọrụ [More ...]
Turkey na Turkey Locomotive na Engine Industry n'ụgbọala dịkarịa ala akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị na-agụsị akwụkwọ n'ime akporo nke mara ọkwa bipụtara ụlọ ọrụ 7 mbanye ga-eme. Turkey n'ụgbọala Industry na Turkey Locomotive na Engine Industry dịkarịa ala akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị gụsịrị akwụkwọ na-aga ime [More ...]